नेपाल एकचीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ त ? | Mechikali Daily
नेपाल एकचीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ त ?
Posted By: Mechi Kalion: ९ माघ २०७३, आईतवार ०५:१८
चीनले तिब्बतलाई स्वशासित क्षेत्र घोषित गरेपछि त्यहा“को शासन गरिरहेका धर्मगुरु दलाई लामा भारत निर्वासित भए । निर्वासनमा रहेर उनले तिब्बतलाई स्वायत्त राष्ट्र तुल्याउन अनवरत प्रयत्न जारी राखिरहेका छन् । तिब्बतमा उनका असङ्ख्य पक्षधर रहेको बुझिन्छ । कतिपय भारत तथा नेपालमा पनि निर्वासित जीवन यापन गरिरहेका छन् । बेलाबखत भारत, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय, सिंहापुर, नेपाल आदि देशहरूमा तिब्बतका पक्षमा आवाज उठ्ने गरेको छ ।
खासगरी चीनका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीहरूले राजकीय भ्रमण गरिरहेका बखत विरोध स्वरूप तिब्बतको समर्थनमा नारा लाग्ने जनप्रदर्शन गर्ने जस्ता काम हुने गरेका छन् । केही वर्षअघि स्वतन्त्र चीनका पक्षधर तिब्बती शरणार्थीले काठमाडौ“मा आत्मदाह गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । यस्तो प्रयत्न धेरै पटक दोहोरिएको छ । यदाकदा केही नेपाली नेताहरू पनि स्वतन्त्र तिब्बतका पक्षमा उभिने र बोल्ने गरेकाले विवादमा आउने गरेका छन् । यस्तै केही महिना अघि भारत भ्रमणमा पुगेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वतन्त्र तिब्बतका पक्षधरस“ग भेट गरे भन्ने विषय निकै गम्भीरतापूर्वक उठ्यो । स्वयं देउवाले नै तत्काल यसको खण्डन गरे र गर्नुप¥यो । यद्यपि उनले त्यहा“ भेटघाट गरेको प्रमाण सहितको तस्बिर विभिन्न माध्यममार्फत सार्वजनिक भयो ।
चीनले तिब्बतमा शासन आरम्भ गरेपछि त्यस क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण उत्कर्षमा पुगेको बताइन्छ । त्यहा“ औद्योगिक विकास भएको तथा पर्यटन प्रबद्र्धन भएको देखिन्छ । शिक्षा, सञ्चार, प्रविधि तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि निकै विकास भएको छ । तर, पुरातन तिब्बती संस्कार र संस्कृति खस्किएको धेरैको बुझाइ छ । मानसरोबर क्षेत्रमा रहेका असङ्ख्य बौद्ध गुम्बा, स्तुप, विहारहरू ध्वस्त पारिएको र अन्यत्र रहेका तीर्थस्थलहरूको संरक्षण सम्बद्र्धन र विकास नगरिएको भन्ने आरोप पनि छ । साथै सक्कली धर्मगुरु दलाई लामाका सट्टामा केन्द्रीय शासकका अनुकूल हुने गरी अर्कै दलाई बनाइएको आरोप पनि छ । यी आरोपहरूको यथार्थ केही रहस्यमै र केही सार्वजनिक नै छ ।
चीनको स्वतन्त्रताका पक्षमा उभिई निर्वासित जीवन यापन गरिरहेका दलाई लामालाई प्रजातन्त्रका निमित्त अनवरत सङ्घर्ष गरिरहेको भन्दै नोबेल पुरस्कार समेत प्रदान गरियो । पश्चिमा देशहरूचीनले गरिरहेको आर्थिक तथा सामरिक बृद्धि र विकासबाट तर्र्सिएका छन् । फलतः कुनै न कुनै बहाना बनाएर चाइनाको यो गति रोक्न चाहन्छन् । यसमा बलियो आधार भनेकै स्वतन्त्र चीन नीतिलाई बढवा दिनु र त्यहा“का जनता र नेतृत्वलाई उक्साउनु भिडाउनु र गृहकलहको भुमरीमा जाकिदिनु हो ।
यस रणनीतिलाई सार्थक तुल्याउन पश्चिमा देशहरू न्वारानदेखिको बल निकालिरहेका छन् । खासगरी यसमा ज्यादै चीन्ता र चासो अमेरिकाको छ । कुनै समय संसारकै बादशाह रुस थियो । पछि विश्व बेलायती शक्तिको उपनिवेशमा पा¥यो । दोस्रो विश्वयुद्धको सेरोफेरोमा अमेरिकाले विश्वलाई आफ्नो वशमा राखेपछि उसैले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ । वर्तमानमा अमेरिकाको सम्प्रभुता विश्वभरि छ । सन् १९९० को दशकताका रुस र अमेरिका सामरिक तथा प्रभावका दृष्टिले करिव बराबरीको अवस्थामा थिए । अमेरिकाले भेदनीतिको उपयोग गरी रुसको कम्युनिष्ट शासन प्रणाली समाप्त गरी प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्नमा भूमिका खेल्यो । उसको यस्तो कूटनीतिले रुसका धेरै प्रान्तहरू स्वतन्त्र भए । फलतः रुसबाट अलग्गिएर धेरै देश बने । सोभियत रुस कमजोर बन्यो । रुसकै एउटा प्रान्त चेचेन्याले पनि स्वतन्त्र बन्ने चाहनाले विद्रोह गर्न आरम्भ ग¥यो । उसको विद्रोहलाई बलपूर्वक दबाइयो । अहिले पनि त्यहा“ कहिलेका“ही विद्रोहको झिल्का देख्न पाइन्छ ।
रुस शक्तिहीन भएपछि पुनः विश्वलाई एकछत्र रूपमा दवावमा राख्न सफल भइरहेको सन्दर्भमा त्यसको करिव तीन दशकपछि प्राविधिक, सामरिक, आर्थिक तथा औद्योगिक दृष्टिले उछिन्ने स्थितिमा पुगेको चीन उसका निम्ति टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । यदि चीनले उछिनेमा आप्mनो विश्वभरि रहेको प्रभाव कमजोर बन्ने सम्भावना रहेकाले अहिले अमेरिका चीनको एकचीन नीतिप्रति असहमत रहने सम्भावना बढ्दो छ ।
क्लिन्टनको शासनकालमा चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध जिकज्याकमै समाप्त भएको देखिन्छ । पटकपटक तत्कालीन ह्वाइट हाउस प्रशासनले चीनमा मानवाधिकार स्थापना गर्नुपर्ने विषय उठाउनुका साथै दलाई लामालाई उक्साएर एकचीन नीतिप्रति असहमति जनाइरहेको परिस्थिति थियो । तर, ओबामाको कार्यकालमा चीन अमेरिका सम्बन्ध त्यति उतारचढावयुक्त रहेको देखिन्न । हालै निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चाइनाको एकचीन नीतिप्रति औंलो उठाएका छन् । उनले ताइवान, सिंहापुर जस्ता चीनको उपनिवेशमा रहेका देशहरूको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएपछि चाइना सरकारले उनको अभिव्यक्तिमाथि असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेको छ ।
एशियाका सन्दर्भमा ट्रम्प प्रशासनले मूलतः चीन, भारत र रुसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यी तिनै मुलुक आर्थिक वृद्धिदर, सामरिक विकास, कूटनीति तथा प्रविधिका क्षेत्रमा दोहोरो अंकले फड्को मार्दै अघि बढिरहेकाले पनि ट्रम्पको ध्यान खिचेको हुनसक्तछ । ट्रम्पले आप्mनो चुनावी अभियानका सन्दर्भमा भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रशंसा गरी उनीस“ग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको ग्रीन सङ्केत दिएका छन् । अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले रुसका वर्तमान राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले डोनाल्ड ट्रम्पलाई जिताउन साइवर ब्लक गराएको आरोप लगाई रसियन कूटनीतिज्ञहरूलाई देश निकाला गराइ सकेका छन् । ओवामाले पुटिनको तिखो आलोचना गरिरह“दा ट्रम्पले चाहि“ पुटिनलाई एउटा बुद्धिमानी नेता भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले यी दुई देशका कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा प्रशंसा गरी यिनीहरूस“ग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न खोजेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, चाइनाप्रति उनको दृष्टि कठोर रहेको छ । पहिले रुस कम्युनिष्ट शासन प्रणाली अन्तर्गत शासित भए पनि वर्तमानमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आइसकेको र भारत प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुक भएकाले पनि उनको नजर यी दुई देशका सापेक्षमा केही कठोर रहेको केहीको बुझाइ छ ।
तर, सामरिक, आर्थिक तथा भौतिक वृद्धिदरका हिसाबले भारत र रुसभन्दा अहिलेलाई चाइना नै अमेरिकाको मुख्य प्रतिस्पर्धी मुलुक भएकाले यी दुई एसियाली मुलुकहरूलाई साथमा लिएर मात्र चाइनाको कद घटाउन सकिने ट्रम्पको विश्लेषण हुनसक्तछ । चाइनाको शक्ति कमजोर बनाउन सकिएमा अरू दुई शक्तिलाई बिस्तारै ठेगान लगाउन सकिने हु“दा अहिले ट्रम्पको अर्जुनदृष्टि चाइनामा परेको देखिन्छ । ट्रम्पको मुख्य नजर चाइना भएको अवस्थामा त्यसले नेपालजस्तो सानो मुलुकमा निकै ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । चीनको कद घटाउनका निम्ति उसका सीमावर्ती अन्य पन्ध्र मुलुकमध्ये नेपालको राजनीतिक परिपक्वता अत्यन्त तरल, कमजोर र स्वार्थान्धताले भरिएको हु“दा उनीहरूले तिब्बती गतिविधि सञ्चालन गर्नका निम्ति यहा“को भूमिलाई उपयोग गर्ने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । अमेरिकाको नेपाललाई हेर्ने दृष्टि भारतको चश्मा नै भइरहेको र उसले नेपाललाई कठपुतली सरह खेलाइरहेको सन्दर्भमा नेपाल अमेरिका र चाइनाको नजरमा रहेको स्पष्ट छ ।
भारत नेपालमा चाइनाको छाया नपरोस् नै भन्ने चाहन्छ । ऊ नेपाललाई उपनिवेशमा राख्न चाहन्छ । अमेरिका चाइनालाई डोमिनेट गर्नमा भारतबाट साथ पाइने आशामा उसको यस चाहनालाई मौनतापूर्वक समर्थन गरिरहेको छ । यस प्रकार भारतदेखि अमेरिका र उसको पिछलग्गु देश बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स आदि देशहरू चाइनाको साइज घटाउनमा उद्दत छन् । यसमा नेपालका कतिपय दल, दलका नेता, तथा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू समेतले सघाइरहेको बुझाइ चाइनाको छ र यदाकदा देखिएका प्रसङ्गहरूले पनि उसको यो दावी मिथ्या नरहेको तथ्य सिद्ध गरिरहेको छ । यसलाई नेपालका शीर्षस्थ नेतृत्व र सरकार प्रमुखले सरकार एकचीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको भनाइबाट पनि पुष्टि हुन्छ । दुई दिन अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यस कथनलाई पुनः दोहो¥याए ।
चाइना एकचीन नीतिमै जोड दिइरहेको छ । उसले एकचीन नीतिमा कुनै परिवर्तन नहुने र गर्न खोजिए कडा प्रतिकार गरिने सङ्केत गरिरहेको छ । उसले विस्तार गरिरहेको बजार र अरू देशका सामाग्रीहरूको उपयोग गर्ने हिसाबले चाइना ठूलो बजार रहेको तथ्य प्रस्तुत गरी सिधै प्रभाव पार्ने तथ्य औँल्याइरहेको छ । उसले नेपाललाई उपयोग गर्ने सम्भावनालाई गम्भीरतापूर्वक लिई नेपालमा आप्mनो उपस्थिति, सहभागिता र चासो बढाइरहेको छ । अहिले उसले बढाइरहेको उपस्थिति र प्रभावलाई लिएर भारत र पश्चिमा मुलुकहरू निकै सशङ्कित बनेका छन् । तर, भारत सहित पश्चिमा मुलुकहरूले अनावश्यक चासो राखे पनि चाइनाले आफ्नो देशको सुरक्षा सन्दर्भमा राखेको चासोप्रति नेपाल पनि गम्भीर बन्नै पर्छ । एवं रीतले पश्चिमाहरूको प्रभाव बढ्दै गएमा नेपाल सा“ढेको जुधाइमा बाच्छाको मिचाइमा पर्ने छ । चाइनाको कद घटाउन नेपालको भूउपयोगको नीति लिइरहेको बुभ्mनु जरुरी छ । नेपालले दुवै देशलाई समान महŒव दिन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सन्तुलनमा आधारित कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने दिशामा अग्रसर हुनै पर्छ ।
कसले के भन्छ र कोही रिसाउलान् कि भन्ने सोच्नुभन्दा पनि के गर्दा आप्mनो मुलुकको भलो हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपाल कूटनीतिमा साहै्र धेरै पछि छ । यस खाडललाई पुर्न दलहरूले अतिरिक्त अभ्यास गर्नैपर्छ । यदि स्वतन्त्र तिब्बत त्यहा“का जनताको चाहना रहेछ भने पनि यसलाई हृदयको कुनामा राखेर आप्mनो देशको उन्नतिका निम्ति चट्टानझैं दरो र कठोर भई एकचीन नीतिलाई नै हरेक नेपालीले अपनाउनु जरुरी देखिन्छ ।